होशियार ! आ’त्मह’त्याको भिडियो शेयर गर्नेलाई यस्तो क’डा का’रबाही गरिने – जानकारीको लागी सबैलाई शेयर गरौँ ! – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /समाचार/होशियार ! आ’त्मह’त्याको भिडियो शेयर गर्नेलाई यस्तो क’डा का’रबाही गरिने – जानकारीको लागी सबैलाई शेयर गरौँ !
फेसबुकसहितका सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइन पोर्टलहरुमा आ’त्मह’त्या गरिएको भिडियो सेयर गर्नेलाई प्रहरीले का’रबा’ही गर्ने भएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालय साइबर ब्युरोले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी त्यस्तो कार्य गर्नेलाई द’ण्डित गरिने जनाएको हो । फेसबुकसहितका सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइन पोर्टलहरुमा आ’त्मह’त्याका भिडियोहरू अपलोड गर्ने क्रम बढेपछि प्रहरीले त्यस्तो गतिविधिमा रोक लगाउन लागेको हो ।
जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ- ‘यस्ता किसिमका कार्यहरु सार्वजनिक नैतिकता एवं शि’ष्टाचारवि’रुद्ध हुने, समाजमा घृ’णा वा द्वे’ष फैलाउने, साथै विभिन्न किसिमका मानसिक पी’डामा रहेका व्यक्तिहरुलाई आ’त्मह’त्या गर्नका लागि दु’रुत्साहन पुर्‍याउने हुँदा नेपालको प्रचलित का’नुन बमोजिम द’ण्डनीय भएकोले त्यस्ता कार्यहरु कसैले पनि नगर्न नगराउन हुन अनुरोध गरिएको छ ।’
साथै आ’त्मह’त्या गर्ने उद्देश्यले सामाजिक सञ्जालमा लाईभ भिडियो सेयर गर्दै गरेको थाहा पाए तत्काल प्रहरीलाई खबर गर्न र व्यक्तिको उ’द्धारमा खटिन प्रहरीले आग्रह गरेको छ ।त्यसैगारी कपाल लामो बनाउन जसलाई पनि मन पर्छ । हरेक युवतीहरु कपाल लामो बनाउने सौन्दर्य प्रशाधनको खोजीमा भौतारिइरहेका हुन्छन् । तर, घरैमा सर्वसुलभ प्याज कपालको सुन्दरताका लागि उपयोगी हुन्छ भन्ने कमैलाई थाहा होला । प्याज कपाल झर्ने र दुई मुखे कपालका लागि उपयोगी हुन्छ । प्याजमा रहेको सल्फरले कपालको जरालाई पोषण दिन्छ, जसले कपालको विकासका लागि मद्दत पुग्छ ।